Enga anie 9, 2022 Demi mpitsoa-ponenana, vorontsiloza
Raha mitady fialofana any Tiorkia ianao dia tsy maintsy mametraka fangatahana fialokalofana. Ny Tale Jeneralin'ny Fitantanana ny Fifindra-monina (DGMM) dia mandray ny fangatahana fialokalofana anao. Olona nandositra na nandao ny tanindrazany noho ny ady na ny fanenjehana. Ary tsy afaka miverina any
Ahoana ny fomba hanokafana kaonty amin'ny banky any Torkia? Banky tsara indrindra any Torkia
Enga anie 4, 2022 Shubham Sharma Banks, vorontsiloza
Ao amin'ny toekarena mavitrika ao Tiorkia, ny indostrian'ny banky dia lafiny manan-danja amin'ny rafitra ara-bola. Ny banky dia mitantana ny ankamaroan'ny vola sy ny varotra sy ny hetsika amin'ny tsenam-bola. Ny ankamaroan'ny banky fanjakana dia natsangana mba hamatsiana ny indostria manokana, toy ny fambolena
Ahoana ny fomba hahazoana asa any Turkey? Torolalana haingana
Enga anie 4, 2022 Demi asa, vorontsiloza
Raha efa manana fahazoan-dàlana hiasa ianao, na Tiorka na Cypriot Tiorka, dia afaka mahita asa any Torkia. Raha tsy manana fahazoan-dàlana hiasa ianao, ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny mitady a
Aprily 28, 2022 Demi zavatra vidiana, vorontsiloza
Ahoana raha miteny aho fa afaka manandrana ny dite tiorka malaza nefa tsy mitsidika an'i Torkia akory. Azo atao ny manandrana ny dite tiorka matsiro ao an-tranonao noho ny fiantsenana an-tserasera. Mazava ho azy, amin'ny fomba ahoana no tsy ananantsika tsakitsaky sasany
Ahoana ny fomba hahazoana visa Tiorka ho an'ny olom-pirenena Pakistaney?
Aprily 18, 2022 Demi Pakistane, vorontsiloza, visa
Mila visa ny olona pakistaney vao hiditra ao Tiorkia. Mila mangataka visa amin'ny masoivoho akaiky anao ianao. Azonao atao ny manomboka ny fangatahanao amin'ny pejy alohan'ny fampiharana sy fanendrena ny Repoblikan'i Torkia Consular Procedures. Raha manana ianao
Ahoana ny fomba hahazoana visa Tiorka ho an'ny olom-pirenena Shinoa? Torolalana fohy
Aprily 18, 2022 Demi Sinoa, vorontsiloza, visa
Afaka mahazo visa Tiorka an-tserasera ao amin'ny e-Visa Republic of Turkey ianao. Ny olom-pirenena sinoa dia afaka mahazo visa mora foana amin'ny fialan-tsasatra fohy any Torkia, ho an'ny fizahan-tany, na ho an'ny orinasa. Raha mila fanampiana bebe kokoa ianao raha te hangataka Tiorka
Ahoana ny fomba hahazoana visa Tiorkia avy any Koety?
Aprily 18, 2022 Demi Koesiana, vorontsiloza, visa
Afaka mahazo visa Tiorka an-tserasera ao amin'ny e-Visa Republic of Turkey ianao. Ny olom-pirenena Koesiana dia afaka mahazo visa mora foana amin'ny fialan-tsasatra fohy any Torkia, ho an'ny fizahan-tany, na ho an'ny orinasa. Raha mila fanampiana bebe kokoa ianao raha te hangataka Tiorka